Mgbasa ozi ndi obodo n'ime ahia ahia: 4 Atụmatụ na usoro | Martech Zone
Ahịa ọdịnaya dị ebe niile ma ọ na-esiwanye ike ịme ka atụmanya gaa ndị ahịa oge a. Azụmaahịa a na - ahụkarị enweghị ike inweta ihe ọ bụla site na usoro nkwalite akwụ ụgwọ, mana ọ nwere ike ịmatakwu ihe ma mee ka ego nweta ego nwa afọ mgbasa ozi.
Nke a abughi echiche ohuru na mpaghara intaneti, ma otutu otutu ndi mmadu ka na-erigbu ya ruo oke. Ha na-emehie di uku dika mgbasa ozi nke ala gosiputara na otu n'ime usoro nkwalite kacha baa uru nke na-ekwe nkwa inyefe nloghachi achọrọ na ntinye ego.
Ma olee otu o si arụ ọrụ? Nwere ike ịme nguzozi ziri ezi n'etiti mgbasa ozi nke obodo na ahịa ọdịnaya? Ọ bụrụ na ịmaghị n'aka etu ị ga-esi zaa ajụjụ abụọ a, gaa n'ihu na-agụ iji mụta ụkpụrụ ndị bụ isi nke mgbasa ozi ụmụ amaala na azụmaahịa ọdịnaya.
Ọ bụghị ihe nzuzo na ịre ahịa ọdịnaya na-achị eluigwe na ala dijitalụ, mana kedu maka mgbasa ozi ala? Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma etu o si arụ ọrụ, ị ghaghi ịghọta ihe ọ pụtara ma lelee stats ndị bụ isi na ngalaba a.
Mgbasa ozi nke ala bụ ojiji nke mgbasa ozi akwụ ụgwọ nke dakọtara na ọdịdị, mmetụta, na ọrụ nke usoro mgbasa ozi nke ha pụtara. Ga-ahụkarị mgbasa ozi dị ka akụkụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi gị ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ kachasị amasị gị dị ka aro ederede.
Nchịkọta Mgbasa Ozi Ndị Amaala
Contentdị ọdịnaya ndị a dị ka nhọrọ nchịkọta akụkọ nke usoro nkwukọrịta enyere. Nke a bụ kpọmkwem ihe na-eme ka mgbasa ozi ala na-arụ ọrụ nke ọma ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi:
Mgbasa ozi ngosipụta nke ndị obodo weputara ọnụego pịa (CTR) 8.8 ugboro elu karịa ụdị ngosi mgbasa ozi.
70% nke ndị ahịa ga - achọ ịmụ banyere ngwaahịa site na ọdịnaya karịa mgbasa ozi ọdịnala.
Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrụ na-achọta aro ọdịnaya ka ọ bụrụ ụzọ kacha baa uru maka mgbasa ozi nwa amaala.
Ndị mgbasa ozi US na-emefu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 44 ijeri na mgbasa ozi ala kwa afọ.
Uru nke Mgbasa Ozi Obodo na Ahịa Ọdịnaya
Mgbasa ozi ndị amaala doro anya dị ike, mana ị kwesịrị ịma na ọ na-abịa n'ọtụtụ sara mbara nke uru bara uru. Ndị a bụ uru dị ukwuu nke mgbasa ozi ala na azụmaahịa ọdịnaya:
Mgbasa ozi ndị amaala anaghị emetụta: N'adịghị ka usoro mgbasa ozi ndị ọzọ, mgbasa ozi ala na-eji enyi na enyi eme ihe. Dị nnọọ ka aha ahụ na-egosi, mgbasa ozi dị otú ahụ dị ka ihe okike na ihe ndị dị ndụ, nke na-eme ka ha nwee mmasị karịa karịa ọkọlọtọ mgbasa ozi ma ọ bụ popups.
Native mgbasa ozi ndị a pụrụ ịtụkwasị obi: Ndị mmadụ na-ewerekarị mgbasa ozi ala dị ka ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ bụghị ihe ịtụnanya, ọkachasị ma ọ bụrụ na imepụta ngwakọta zuru oke nke mgbasa ozi na ịre ahịa ọdịnaya. N'okwu a, ị nwere ike ịmasị ndị na-ege ntị naanị site na iji ọdịnaya nwere nghọta.
Elu CTR: Mgbasa ozi ndị nwe ala nwere ọnụọgụ pịa-site na oke (CTR) karịa ụdị mgbasa ozi ọkọlọtọ, nke bụ nsonaazụ nke ntụkwasị obi na ntụkwasị obi ha. Typedị ụdị mgbasa ozi a anaghị ebugharị, yabụ ndị ọrụ anaghị eche na ha ga-eri ọdịnaya ahụ ma soro ya mechaa.
Native ads na-adabara onye ọ bụla: Nchikota nke mgbasa ozi nke ndi ala na ihe okike ekike zuru oke dabara onye obula no na azumahia a. Ndị ahịa hụrụ ya n'anya n'ihi na ọ na-ewepụta ọdịnaya dị mma, ebe ndị mbipụta nwere mmasị na ya n'ihi na ọ naghị egbochi posts organic. N'ikpeazụ, ndị na-akpọsa ozi na-ahụ mgbasa ozi nke mba maka na ọ na-ebute nsonaazụ ezubere iche.
Mgbasa ozi ndị ala dabara na nyiwe niile: You nwere ike ebipụta nwa afọ mgbasa ozi na ọ fọrọ nke nta ọ bụla nke nkwukọrịta enwere. Site na mgbasa ozi mgbasa ozi na weebụsaịtị gaa na akwụkwọ akụkọ ọdịnala na broshuọ, mgbasa ozi ala na-emetụta ndị na-ajụ ase.
Zọ 4 iji meziwanye mgbasa ozi ndị ala
Ugbu a na ị ghọtara atụmatụ dị egwu nke mgbasa ozi ala, naanị ihe fọdụrụ bụ ịmụ otu esi ejikọ ya na mbọ ị na-agba ahịa ọdịnaya. Anyị na-akwadoro gị ndepụta nke usoro aghụghọ na ụzọ aghụghọ anọ:
ND #MỌD # #1: Jiri uche gị mee ya
Iwu izizi nke mgbasa ozi nwa amaala agaghị abụrịrị ihe etinyere etinyere ma wee dee ya n’uche gị. Echefula na mgbasa ozi nke mba kachasi elu abughi ihe kariri ihe omuma di nma nke na-akpali ndi na-agu akwukwo ya.
Ọrụ gị bụ iji nyochaa ọdịmma nke atụmanya gị ma lekwasị anya n'isiokwu dabara na atụmanya ha, olileanya ha, mkpa ha, na nkwenkwe ha.
Jake Gardner, otu onye na-enye ọrụ at ọkachamara ederede ọrụ, kwuru na ọ dị mkpa ịghọta otú ndị na-azụ ahịa si eche banyere otu isiokwu: “Gbalịa ịmata nsogbu ndị ha na ha na-alụ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịkwadebe ọdịnaya dị elu nke ga-agba ndị mmadụ ume ime ihe mgbe ha gụrụ akwụkwọ. ”
N'otu oge ahụ, ị ​​kwesịrị iche echiche banyere ọwa nkesa kachasị mma. Youchọrọ igosipụta mgbasa ozi site na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ soro ibe ndị akwadoro gaa? Nkwado anyị bụ iji ọwa ị maara nwere ike iru ndị na-ege gị ntị ọkachasị.
ND #MỌD # #2: Mepụta mbipụta kwụ ọtọ
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-atụle ego nke abụọ dị oke mkpa ka ọ na-eme ọdịiche dị n’etiti mkpọsa na-aga nke ọma na mgbasa ozi na-adịghị mma. Ya bụ, ị kwesịrị ị na-eme ihe niile ọ na-ewe iji kwadebe a standout akwụkwọ ọ bụla nwa afọ ad iche iche.
Nke mbu, ọdịnaya kwesiri ibu ihe omuma, nkuzi, na / ma obu nnabata. Nke abuo, a na-atụ anya na mgbasa ozi nke ala ga-abụ ebumnobi na enweghị echiche. Isi okwu a bụ ime mkpebi ndị data na-akwado ma kwadoo okwu gị na ihe akaebe.
N'otu oge ahụ, posts gị ga-abụ nke zuru oke n'ihe gbasara mkpoputa na ụtọ asụsụ. Otu ndudue nwere ike imebi aha gị, yabụ ị ga-enyocha ọdịnaya ọ bụla ugboro abụọ tupu ị dịrị ndụ. Ọ bụrụ na ịgụgharị abụghị ihe gị, anyị na-agba gị ume ka ị jiri nyiwe dijitalụ dị ka Grammarly or Hemingway.
ND #MỌD # #3: Na-ebuli peeji nke ọdịda
Ebumnuche kachasị nke mgbasa ozi mgbasa ozi niile bụ ibugharị ndị ọrụ na ibe ọdịda dabara. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ị ghaghị ijide n'aka na peeji ọdịda gị dabara nke ọma na ozi nke ọdịnaya ị mepụtara.
Ọ dị mkpa iji otu ụdị na ụda nke copywriting iji hụ na ọkwa kachasị mma nke akara ngosi. N'ezie, peeji nke ọdịda ga-akwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị na-atụ anya na ị ga-agụ.
N'ikpeazụ, ibe a ga-enwerịrị oku doro anya na nke a na-ahụ anya iji mee ihe (CTA). Igodo CTA nke edoziri nke ọma na-enye ndị ọbịa ntụzịaka ọzọ ma gosi ha otu esi etinye aka na ọdịda.
ND #MỌD # #4: Hụ iji melite
Ntuziaka ikpeazụ na ndepụta anyị bụ tụọ nsonaazụ nke ọdịnaya mgbasa ozi ala gị n'ihi na ọ bụ naanị ụzọ iji melite mkpọsa n'ọdịnihu. Ọrụ a dị mfe karịa ma ọ bụrụ na ị setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ ziri ezi ma chọpụta isi arụmọrụ egosi (KPI).
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọtụtụ ndị mgbasa ozi na-elekwasị anya na oke abụọ - echiche na pịa. Ọ bụ ezie na KPI abụọ ahụ dị ezigbo mkpa, anyị na-atụ aro ka anyị lekwasị anya n'ihe nke atọ na-ekpughe ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke mkpọsa gị. Anyị na-ekwu maka itinye aka na ntinye pịa, ntinye dị mkpa nke gosipụtara arụmọrụ nke mgbasa ozi ala.
Ihe okike bu otu n'ime echiche ahia ahia kachasi ike nke oge anyi, mana odighi nfe ichota onodu gi na igwe dijitalụ ya na otutu ndi ogha n’ile di iche iche. Nke a bụ ebe ọkwa mgbasa ozi nke obodo iji nyere aka azụmaahịa n'ịkwalite njikọ ndị ọrụ.
Na nke a, anyị kọwara echiche nke mgbasa ozi ala ma gosi gị ụzọ anọ iji jikọta ya na azụmaahịa ọdịnaya. Kwesịrị iji ndụmọdụ na aghụghọ ndị a iji chekwaa mkpọsa mgbasa ozi nke ala ka mma, mana ijide n'aka ide ederede ma ọ bụrụ na ịchọrọ aro ndị ọzọ si n'akụkụ anyị - anyị ga-enwe obi ụtọ ịza!
Tags: nwa afọ mgbasa ozinkọwapụta nkọwapụta asụsụ mbaamaala mgbasa oziNtuziaka mgbasa ozi nwa afọala ngosi mgbasa ozimpụgaelekọta mmadụ mediaaro ọdịnaya